Nnipa Nwɔtwe Nyaa Nkwa Kɔɔ Wiase Foforo Bi Mu | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Nnipa Nwɔtwe Nyaa Nkwa Kɔɔ Wiase Foforo Bi Mu
Noa ne n’abusua ne mmoa no kɔɔ adaka no mu. Yehowa too adaka no mu, na nsu no fii ase tɔe. Nsu no tɔɔ saa ara, nanso adaka no deɛ, na ɛda nsu no ani. Afei nsu kataa asase so nyinaa. Abɔnefo a wɔankɔ adaka no mu nyinaa wui. Nanso Noa ne n’abusua a wɔwɔ adaka no mu deɛ, wɔanwu. Wunhu sɛ wɔn ani begye paa sɛ wotiee Yehowa?
Nsu tɔɔ awia ne anadwo nna mmaako mmaako 40 ansa na ɛretew. Nkakrankakra, nsu a ayiri no kɔɔ fam, na adaka no kosii bepɔw bi so. Nanso na nsu wɔ asase so nyinaa, enti na ɛsɛ sɛ Noa ne n’abusua no twɛn kakra ansa na wɔapue afi adaka no mu.
Akyiri yi, nsu no nyinaa wee maa asase so woe. Bere a Noa ne n’abusua kɔhyɛɛ adaka no mu no, edii bɛboro afe baako ansa na Yehowa reka akyerɛ wɔn sɛ wompue. Wopuei no, na ɛte sɛ nea wɔaba wiase foforo bi mu. Wɔn ani gyee sɛ Yehowa agye wɔn nkwa, enti wɔbɔɔ afɔre de daa no ase.
Yehowa nso ani gyee afɔre no ho. Ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔremfa nsuyiri nsɛe nneɛma a ɛwɔ asase so nyinaa bio da. Ɔmaa nyankontɔn (rainbow) bɛdaa soro de dii nea waka no ho adanse. Ɛno ne nyankontɔn a edi kan. Woahu nyankontɔn wɔ soro pɛn?
Afei Yehowa ka kyerɛɛ Noa ne n’abusua sɛ wɔnwo na wɔnhyɛ asase so ma.
“Noa hyɛn adaka no mu, na [nkurɔfo anhu] kosii sɛ nsuyiri no bae bɛpraa wɔn nyinaa kɔe.”—Mateo 24:38, 39
Nsɛmmisa: Bere a Yehowa too adaka no mu no, dɛn na esii? Sɛ nyankontɔn bɛtɔ soro a, dɛn na ɛkyerɛ?
Ɔne “Nokware Nyankopɔn Nantewee”
Nsɛnnennen bɛn na Noa ne ne yere hyiae wɔ wɔn mma no ntetee mu? Dɛn nti na na ehia sɛ wonya gyidi na ama wɔatumi ayɛ adaka no?